Inona no ho hita any Vietnam | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Vietnam
Maria | | Toerana fitsangatsanganana, Fitsangatsanganana any Azia
Vietnam dia iray amin'ny toeran-kaleha feno indrindra any Azia atsimo atsinanana ankehitriny. Firenena hafahafa any Indochina miaraka amina nahandro matsiro, kolontsaina tokana ary natiora mahavariana. Manome fahafaha-manao maro ny firenena! Io no renivohitra Hanoi, Ha Long Bay, Hoi An, Saigon taloha na ny Delta Mekong.
1 Rahoviana no handeha ho any Vietnam?
2 Inona no jerena any Vietnam?
2.3 Tanànan'i Kaisara Thang Long
2.5 Saigon taloha
3 Milamina ve any Vietnam?
4 Vaksiny hankany Vietnam
5 Fomba fandoavam-bola sy vola
Rahoviana no handeha ho any Vietnam?
Ny fotoana tsara indrindra handehanana mankany Vietnam dia mandritra ny main-tany, izany hoe, manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Aprily, amin'ireo volana izay tsy dia be loatra ny orana. Amin'ny faran'ny volana janoary dia ankalazaina ny festival Tet, izay fotoana fidiran'ny mpizahatany tokoa.
Inona no jerena any Vietnam?
Any avaratr'i Vietnam, any akaikin'i Sina, dia ahitantsika ny iray amin'ireo endrika manintona indrindra manerantany: Ha-Long Bay, nanambara ny World Heritage Site an'ny UNESCO tamin'ny taona 1994 ary nandinika ny iray amin'ireo zava-mahatalanjona 7 vaovao natiora.. Ny fivezivezena eo amin'ireo vatosokay sokay miala amin'ny ranomasina no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hita any Vietnam. Sary karatra paositra tsy hay hadinoina ho an'ny media sosialy avy amin'ny tokotanin'ny sambo.
Ny renivohitr'i Vietnam dia miloko sy marevaka. Olona marobe tsy tapaka ao amin'ny tsena nentin-drazana, mpifanila vodirindrina artista, fivarotana sakafo an-dalambe ... fa koa toerana ho an'ny fitoniana manodidina ny tempoly sy pagoda na Buddhists na Hoan Kiem Lake. Miaraka amin'ny lova iray arivo taona mahery, any Hanoi dia azontsika atao ihany koa ny mahita tanàna manodidina miaraka amin'ny maritrano efa an-jato taona izay hankasitrahana ny fitaomana ny sinoa, frantsay ary Azia atsimo atsinanana.
Tanànan'i Kaisara Thang Long
Ny iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra hita any Vietnam dia ny tanànan'ny fanjakan'ny Thang Long, toeram-panjakan'ny mpanjaka ary ivon-toerana politika tsy mihoatra ny 13 taonany. Nambaran'ny Unesco ho toy ny vakoka manerantany izy tamin'ny 2010 ary rafitra sy tranobe vitsivitsy sisa tavela.
Na izany aza, taloha Thang Long dia nisy rindrina sy tranobe, trano mimanda ary tanàna voarara izay toeram-ponenan'ireo emperora. Rehefa nifindra tany Hue ny renivohitra dia maro ireo trano no rava ary nandritra ny fanjanahan-tany frantsay tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia navadika ho faritra onenana ilay ampahany.
Ny faritra malaza indrindra any Azia atsimo atsinanana dia ny Mekong Delta, izay manodidina an'i Vietnam sy Kambodza. Any amin'ny atsimon'ny firenena ny Delta Mekong dia iray amin'ireo toerana tsy manam-paharoa ao amin'ny firenena feno tanimbary, labyrintan'ny rano, trano manetriketrika eo amin'ny vodilanitra sy sambofiara izay sady trano mitsingevana no maotina.
Ho Chi Minh na Old Saigon dia iray amin'ireo tanàna mavitrika indrindra mahita an'i Vietnam sy ny be mponina indrindra any Azia atsimo atsinanana. Eny an-dalambe dia mifangaro amin'ny fomba moderina tandrefana ny fomban-drazana Vietnamianina. Toa an'i Hanoi, manana maritrano mpanjanatany voataona frantsay sy boulevards malalaka izy, feno olona. Tena mahaliana dia ny fitsidihana ny tsenan'i Ben Thanh mikorontana izay ahafahanao mividy sakafo, voninkazo ary eny koa ny sahona.
Nandritra ny fotoana lava be io no seranana manan-danja indrindra any Vietnam satria nampifandray an'i Azia sy Eropa nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX tamin'ny lalam-barotra. Androany, Hoi An dia iray amin'ireo tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra sy manan-tantara indrindra hita any Vietnam. Sinoa, Japoney, Holandey na Portiogey no nandalo teto, nahasarika ny hetsika ara-barotra tsy mampino sy ny hakanton'ity seranan-drano ity.
Androany dia iray amin'ireo ivom-pizahantany malaza indrindra any Vietnam izy io ka mbola mitazona io rivotra avy amina tanàna maro kolontsaina io izay nampalaza azy io taloha. Anisan'ireo toerana tena mendrika hitsidihana azy ireo: ny tsena afovoan'i Hoi An, ny tetezana mitafo Japoney, ny tempolin'i Quang Cong, natokana ho an'ny malaza sy ny sasany amin'ireo trano sy fivarotana nentin-drazana izay mampifangaro ny fomba vietnamiana, miaraka amin'ny eropeana, japoney na sinoa.
Milamina ve any Vietnam?
Na dia heverina ho iray amin'ireo firenena aziatika azo antoka aza i Vietnam, dia ilaina foana ny mitandrina. Ny tranga lehibe mitranga amin'ireo mpandeha eto dia mifandraika amin'ny olana ara-pahasalamana sy ny halatra valizy. Noho izany dia ilaina ny maka fiantohana fitsangantsanganana izay manana ireo sarony ireo.
Vaksiny hankany Vietnam
Mba handehanana any Vietnam dia tsy misy ny fanaovana vaksiny faneriterena fa ny tetanosy, tazo typhoid, Hepatitis A sy B, ary tazo no aroso. Na izany aza, tokony hijery matetika ireo tolo-kevitry ny Ivontoerana Iraisam-pirenena momba ny vaksiny ianao.
Fomba fandoavam-bola sy vola
Ny vola Vietnam dia Dong Vietnamese fa ny dolara sy ny euro matetika no ekena. Amin'ny orinasa sasany dia manampy vola fanampiny amin'ny asa rehetra atao amin'ny carte de crédit ary any ambanivohitra dia vola ihany no eken'izy ireo. Mety tsy ekena any amin'ny magazay sy trano fisakafoanana ny faktiora simba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Inona no ho hita any Vietnam
Nosy Faroe, toerana any Danemark
Fotoana tsara indrindra handehanana any Japon